Manjakandriana : Zava-mahadomelina mahery vaika 140 kg tra-tehaka -
AccueilSosialyManjakandriana : Zava-mahadomelina mahery vaika 140 kg tra-tehaka
09/06/2018 admintriatra Sosialy 0
Zava-mahadomelina mahery vaika milanja 140 kilao notsinjaraina tanaty fonosana marobe, ary natao tanaty gony jiafotsy miisa folo sy sakaosy iray no tra-tehaky ny mpitandro filaminana teny Manjakandriana ny alakamisy antoandro lasa teo. Nahitana rongony milanja 80 kg, vovoka mavo 20,860 kg izay heverina ho “cocaïne” na “héroïne” na ”amphétamine” , “cristal” mitotaly 4,775 kg ary zava-mahadomelina mahery vaika mbola tsy voasivana milanja 35 kg tao anatin’izany. Sarona niaraka tamin’ireo entana ireo ihany koa ireo teratany maorisiana telo sy teratany malagasy miisa fito, isan’ny tompon’antoka tamin’ny fitondrana ireo zava-mahadomelina mahery vaika ireo. Araka ny loharanom-baovao, dia nentina tamin’ny fiara Sprinter ary nokasaina halefa any Nosy Be ireo “cocaïne” sy “héroïne” ary rongony ireo . Mbola tsy voafaritra mazava hatreto ny toerana niaingan’izany sy ny fomba nidirany teto Madagasikara saingy ny azo antoka kosa, dia avy any Avaratra ireo entana marobe ireo, ary nokasaina haondrana any Maorisy na any La Réunion amin’ny alalan’ny sambo. Fampilazam-baovao sy fiaraha-miasa teo amin’ny tompon’andraikitry ny fadin-tseranana eto an-toerana sy any amin’ireo nosy rahavavy voalaza etsy ambony ireo no nahafantarana ny fivezivezen’ireto olona nitatitra zava-mahadomelina mahery vaika tamina gony maromaro ireto. Rehefa nandeha ny fikarohana sy ny fanarahan-dia, dia izao tra-tehaka izao.
Nentina nalaina am-bavany teny amin’ny biraon’ny manam-pahefana avy hatrany moa ireto farany, ary nogiazana teo noho eo ihany koa ireo zava-mahadomelina mahery vaika ireo. Mbola miandry ny valin’ny fitiliana kosa ireo vovoka mavo ahafahana manamafy tokoa na “heroïne” na “cocaïne” na “amphétamine” izany. Ankoatra ireo teratany maorisianina telo, sy teratany malagasy enina izay nahitana vehivavy telo sy lehilahy telo, dia mbola misy olona iray voarohirohy ao anatin’ity raharaha ity ihany koa hosamborina any Toamasina. Marihina fa voafaoka ao anatin’ity asa ratsy ity ny mpamilin’io fiara sprinter io sy ny mpanampy azy. Isan’ny zava-mahadomelina mahery vaika goavana tra-tehaka teto amintsika ity sarona teny Manjakandriana ity. Raha atao ny kajikajy, dia amina miliara maromaro ny totalim-bidin’izany, satria ny graman’ny “héroïne” fotsiny no efa mahatratra 300 000 ariary , raha toa tafakatra hatramin’ny 400 000 Ariary latsaka kely ny “cocaïne”. Hatreto dia tsy afa-bela amin’ity resaka fanondranana an-tsokosoko zava-mahadomelina mahery vaika ity i Madagasikara, satria dia tafiditra ao anatin’ireo firenena handalovan’izany alohan’ny ahatongavan’ny entana any Amerika . Nanatanteraka valandresaka mahakasika ity tranga ity teny Antaninarenina moa ny teo anivon’ny fadin-tseranana io omaly io.